Ngaba ndingakwazi ukulungisa i-Amazon ukubeka inzame kwixesha lam elidlulileyo lokulungiselela ngeGoogle?
Njengaye nayiphi enye injini yokukhangela, akukho mkhokelo ophezulu okanye umyalelo wenyathelo-nge-nyathelo ukwenzela ukuba udidi lwe-Amazon lulungiselele indlela efanelekileyo yokuhamba phambili kwiincutshe ze-niche kanye. Ndiyathetha ukuba isabelo seengonyama seendlela zokucwangcisa phezulu siqhubeka ngokuqhubekayo kwaye sitshintsha minyaka yonke (nangona inyanga). Ukuba ulapha apha kwaye ucinge indlela yokwenza ngcono i-Amazon yakho yokuqala uluhlu - ngoko sele usendaweni efanelekileyo. Ndiyathetha ukuba kuya kuba lixesha elide lokuqhubeka nokudala isicwangciso.
Kakade, iinjongo ezinkulu zophando ezifana ne-Google ngokwayo kufuneka zihlale zihamba phambili kwinani lakho. Kodwa ukusuka kwimbono ye-e-yorhwebo kunye nembono yoshishino lokuthutha i-drop-shipping kwinqanaba, i-Amazon ayikho into ebaluleke kakhulu yokubambisana nenombolo yesibini - traje azul corbata verde. Kodwa ke, phawula ukuba ukulungisa i-Amazon ngendlela efanelekileyo, kuya kufuneka ube nolwazi olusisiseko sokubeka ubuncinane isicwangciso sakho sokuqala uze usebenze ngokuhamba kwesikhathi.
Ukwenza njalo, unokufumana ithuba elihle lokuqala kwaye uzive ulungele ukuqhubela phambili - ngethamsanqa, i-algorithm yokukhangela yama-Amazon ayikho eyinkqantosi njengeyasetyenziswa yi-Google. Emva koko, ayitshintshi njengobundlobongela kwaye ngokuphindaphindiweyo kuninzi olubanzi olubanzi lwe-algorithm yokukhangela kwehlabathi ukubheja. Ngoko, ngaphantsi ndiza kukubonisa uluhlu lweengongoma ze-bullet ukukunceda ukwandisa uluhlu lwe-Amazon kunye nengcezu yengqondo-ubuncinci ukuphepha iingqungqelo eziqhelekileyo ezijikeleza isayithi.
Ukuqonda Imigaqo eSebenzi yokuSekwa ​​kweeNtengo kwi-Amazon
Ngaphambi kokungena kulo mbandela kwaye kukunika amacebiso athile wokulungisa i-Amazon ngendlela efanelekileyo, ndivumele ukuxinezela kwakhona - i-Amazon ihluke kakhulu nakwezinye iinjongo zokusesha njengeGoogle ngokwazo. Ndiyathetha ukuba ezinye iingcebiso kunye namacebo angabonakala ngathi zifana. Nangona kunjalo, ukuqonda iintlobo ezahlukileyo kunye neendlela ezibonakala ngathi zifana - yintoni na eyona nto inzima kunayo.
Masenze umehluko phakathi kwe-Amazon kunye ne-Injini yosesho ye-Google
I-CTR kunye nokuwaneliseka - amava anomsebenzisi kunye nokuguqulwa ngamaphuzu okuqala abonisa ngokupheleleyo Amazon kunye neGoogle..Ngelixa i-giant search yenzelwe ukuthengisa iintengiso, indawo enkulu yemarike yehlabathi ihloselwe ukuthengisa iimveliso. Ngokomlinganiselo wokulinganisa ukusebenza, kuthetha ukuba i-Amazon ixhomekeke ekuphononongeni ingeniso (kungenjalo, umda osemgangathweni ngokukhangela), phakathi kwe-Google ukubethelwa ngokwemvelo kwiimetrikhi zewebhu eziphambili, ezifana ne-CTR okanye ixesha eliqhelekileyo elichithwe kwiphepha ngetyelelo lomsebenzisi.
Ulungelelaniso kunye neProstration - ithetha ukuba ngelixa i-index e-Amazon ihlelwe ngokupheleleyo phantsi kweefom ekhethekileyo, kukho ukunyanzelisa okubonakalayo kwiGoogle eye ihamba ngokuthe ngqo kwindlela ehlelwe kakuhle 2015
kwi-Page kunye no-Off-Page - iphakamisa ukuba kufuneka ulungiselele uluhlu lwakho lwe-Amazon olujikelezayo -poptimization page. Ngokomzekelo, ukwakha isakhiwo sekhonkco sekhasi elikude liza kuba nefuthe elikufutshane kwizithuba zakho zangempela, ngokuqinisekileyo andithandi indlela yeGoogle.
Ukuzibandakanya ngokumalunga nokuqala - nantsi singena kumbuthano onzima. Into enokuthi ama-Amazon akhathaleli nje ngokubhaliweyo kunye nento ekhethekileyo yodwa - ngenxa yokuba ininzi yesithuthi sakho isoloko ikhutshwe kubaphandi abasebenzayo sele bethenga ngaphandle. Ukuba unamaxwebhu athile afanayo okanye iibhola zamanqaku naluphi na uluhlu-ungakhathazeki. Ngakolunye uhlangothi, ke, ukufaka isicelo sokukhawuleza ngokubanzi okanye ukukopisha i-copycatting enesibindi ukuze ulungise i-Amazon uluhlu luya kufaneleka ngokulinganayo - njengaye ku-Google.